हरेक लगनशील कस्मेटिक्स निर्माता सकेसम्म बढि प्राकृतिक र स्वस्थ रूपमा आफ्नो उत्पादन गर्न प्रयास गरिरहेको छ। यो छाला मा भिटामिन र अन्य तत्वहरू को प्रभाव मा अध्ययन को एक नम्बर सञ्चालन। यसरी, यो भिटामिन सी संग एक क्रीम उत्कृष्ट विरोधी उमेर बढन प्रभाव छ फेला परेन। आखिर, यो भिटामिन लामो ज्ञात र किनभने यसको एंटीओक्सिडेंट गुण धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो गरिएको छ, धन्यवाद जो यो दृढता र रक्त नली को लोच गर्न संलग्न, को अनुहारको रुप रंग र तीव्र ऊतक पुनर्जनन सुधार गर्न।
छ किन भिटामिन सी संग क्रीम बुढ्यौली को पहिलो संकेत सूचना सुरु र छाला को वृद्ध भएका महिला, को लागि त। यो शरीर मा elastin र कोलैजेन को उत्पादन तल वा रोक्छ slows भन्ने तथ्यलाई कारण छ। र यो यी दुई प्रोटीन छाला को लोच र दृढता लागि जिम्मेवार छन् छ। कस्मेटिक उत्पादनहरु को विशेष प्रविधि निर्माण सम्भव गर्न "आपूर्ति" को सीधा छाला गर्न भिटामिन बनाउन, त्यसैले प्रभाव अधिक चाँडै हासिल छ। को विशेषज्ञहरु कस्मेटिक्स प्रयोग सीमित गर्न सिफारिस छैन, तपाईं पनि ठूलो परिमाणमा खाद्य पदार्थ अनमोल भिटामिन सी युक्त को आफ्नो दैनिक आहार मा समावेश गर्न आवश्यक
राम्रो माग उत्पादनहरु ज्ञात फिनिस कम्पनी Lumene, एक स्थानीय ताल बाट यसको नाम पायो जो। लगभग हरेक महिला कम्तिमा एक पटक भिटामिन सी प्रयास गर्न क्रीम "लुमेन" जीवनमा, म आफ्नो कार्य खुसी थियो। Dissatisfaction उनले विभिन्न कारण छैन आयो गर्नेहरूलाई द्वारा मुख्य रूप व्यक्त गरे। छाला उपस्थिति, यसको चम्कने र लोच मा चिह्नित सुधार बाँकी। मायालु एजेन्ट पक्षमा अर्को महत्त्वपूर्ण तर्क ब्रान्ड उत्कृष्ट उत्पादन गुणस्तर संग मिलेर एक उचित मूल्य छ भन्नुभयो।
त्यसैले किन भिटामिन सी यस्तो कार्यहरू एक क्रीम छ? यसलाई पहिले नै माथि उल्लेख कोलैजेन उर्तानु गर्न शरीर मद्दत गर्छ भन्ने तथ्यलाई। यो कि ज्ञात छ पराबैंगनी रेज , यो पहिले उमेर बढन कारण, छाला मा नकारात्मक असर एक क्रीम रूपमा, अन्य कुराहरु पनि सूर्य जोगाउँछ।
प्रयोग क्रीम लागि आधारभूत नियमहरू
Beauticians पहिलो गहिरो peeling लिनुहोस्, र त्यसपछि एक भिटामिन क्रीम लागू सल्लाह छन्। त्यसैले तपाईं छोटो अवधिमा साँच्चै अचम्मको परिणाम हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। को क्रीम मा भिटामिन सी सामग्रीको के प्रतिशत पत्ता लगाउन अर्को धेरै महत्त्वपूर्ण। यो 0.3% भन्दा कम हुनु हुँदैन, वा कायाकल्प प्रभाव अपेक्षित गर्नुपर्छ। यो क्रीम लागि प्याकेजिङ्ग पनि महत्त्वपूर्ण छ, किनभने हामी माथि सम्पत्ति थाहा जब प्रकाश र हावा उजागर बिखर घटक। तसर्थ, प्याकेजिङ्ग hermetically छाप गर्न छ।
हामी भिटामिन सी संग क्रीम दुई प्रकार को हुन सक्छ कि सम्झना गर्नुपर्छ: दिन र रात। Lumene कम्पनी दुवै विकल्प यसको ग्राहकहरु प्रदान गर्दछ। तिनीहरूलाई बीच मतभेद औषधिको खुराक भिटामिन युवा रूपमा छन्: पहिलो मामला मा यो दोस्रो सानो छ - ठूलो। केही राम्ररी अनुहार शुद्ध पार्नुभएर पछि यस्तो कस्मेटिक उत्पादन को प्रयोग, एक दिन एक पटक सबै भन्दा राम्रो छ भन्ने विश्वास गर्छन्। यो सामान्यतया राति हुन्छ। तर छाला सूर्य गरेको रेज, जो त्यसैले भिटामिन सी प्रदान गर्न सक्छ सुरक्षा आवश्यक दिन, यो सबै भन्दा राम्रो जटिल मा क्रीम दुवै प्रयोग गर्न छ।
पेट मा छाला कसरी कस गर्न
को कमी लुकाउन तरिका - को खत मा टाटु
चिकन आलु, बन्दागोभी र अन्य additives संग सुखा - प्रत्येक दिन को लागि एक पकवान
Vlad III को Impaler: जीवनी, रोचक तथ्य र दन्त्यकथा
उपयोगी आशय कसरी एक व्यायाम बाइक चयन गर्न
गुणात्मक जानुहोस्: सीएस मा एक चलचित्र कसरी बनाउने?
क्रास्नोडार क्षेत्र को लाल बुक: को वनस्पति र जीव
"Maynkraft" मा सुँगुर वा सुँगुरहरु सबै कसरी रत्तीएको गर्न
उपन्यास "हाम्रो समय एक हिरो" मा महिला चरित्र: एक निबंध
हवाई अड्डा "तामबोभ-डन"
लगानी र प्रमुख लगानी